Ọ bụrụ na ejiri ekwentị gam akporo 7.1 jikwaa ekwentị gị, ị ga-agbanwe ya na 2021 ee ma ọ bụ ee | Gam akporosis
Otu n'ime nsogbu ndị ọrụ gam akporo na-eche ihu bụ nkewa, nsogbu nke nke nta nke nta ọ na-edozi ọ dịkarịa ala n’etiti ụfọdụ ndị nrụpụta dịka Samsung, bụ onye kwupụtara na August gara aga na ọdụm ha ga-enwe mmelite nke afọ 3, nke bụ otu isi ihe ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-emegharị ekwentị anyị.
Gịnị mere m ji kwuo otú ahụ? Nsogbu nke mmelite na gam akporo, ọ bụghị naanị na pụtara na anyị enweghị ike ịnụ ụtọ akụkọ kachasị ọhụrụ sitere na nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo, mana anyị na-achọtakwa nsogbu metụtara nchekwa nke smartphones na-agabigaghị ọdụ ya n’onwe ya.
Dị ka anyị nwere ike ịgụ na Ndị uwe ojii gam akporo, nzukọ ahụ ka anyị Encrypt kwupụtara na ekwentị niile nwere nsụgharị tupu gam akporo 7.1.1 agaghị adaba na asambodo ha site na 2021, nke pụtara na ọtụtụ weebụsaịtị agaghịzi enwe ike ịnweta site na ụdị ndị a.
Ekwesiri icheta na taa akwukwo nile na-eji protocol https, protocol nke na-enye ohere ka ezoro ezo ihe omuma site na ihe nkesa rue na njedebe ya na nke ozo, ya mere ọ dịghị onye nwere ike ịnweta data n'ụzọ, ị nwere ike ịnweta ha na-enweghị decryping ha (usoro nke nwere ike iwe ọtụtụ afọ).
Ka anyị mee Encrypt kwuru na ọ ga-akwụsị ịbanye mbinye aka na ndabara maka asambodo dịka nke Jenụwarị 11, 2021 na ga-ahapụ nzukọ ahụ na Septemba 1, 2021.
The naanị ihe ngwọta, nke bụ n'ezie ọkara ihe ngwọta, bụ site na mWụnye ihe nchọgharị Mozilla Foundation, Firefox, (Mozilla bụ onye mmekọ Encrypt) ebe ọ nwere ụlọ ahịa nke ya, mana ọrụ ya na ntanetị weebụ, ọ bụghị ngwa ụlọ akụ dịka ọmụmaatụ.
Taa, 33,8% nke ekwentị niile nke jikọọ na Google Play nwere nsụgharị tupu gam akporo 7.1.1. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya ọnụahịa nke smartphones agbadawo ọtụtụ iji gboo mkpa, ọkachasị n'ime ọkwa dị ala na ntinye, yabụ anyị nwere ike ịchọta ọnụahịa dị egwu maka ihe na-erughị 200 euro na gam akporo 10.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ọ bụrụ na ejiri ekwentị gam akporo 7.1 jikwaa ekwentị gị, ị ga-agbanwe ya na 2021 ee ma ọ bụ ee